Izikhokelo zaBaqalayo kwi-SQL Inaliti kunye ne-Cross-Site Scripting | Martech Zone
Andikho kwimeko apho kufuneka ndikhathazeke kakhulu ngokhuseleko, kodwa ndihlala ndiva ngobuthathaka esizikhusela kubo. Ndicela nje umyili wenkqubo ethile ekrelekrele kwaye athi, "Ewe, sigutyungelwe.", Kwaye ke uphicotho lokhuseleko lubuya lucocekile.
Nangona kunjalo, zimbini ii-'hacks 'zokhuseleko okanye ubungozi obunokuthi ufunde okuninzi kumnatha kwezi ntsuku, i-SQL Injection kunye ne-Cross-Site Scripting. Bendibazi bobabini kwaye ndifunde iibhulethini ezimbalwa 'zobuchwephesha' kuzo, kodwa ingeyiyo inkqubo yokwenyani, bendihlala ndilinde uhlaziyo lokhuseleko okanye ndiqiniseke nje ukuba abantu abalungileyo bayazi kwaye ndiza kuqhubeka.
Ezi zinto zimbini zibuthathaka zizinto ekumele wonke umntu azi ukuba kunjalo, nokuba ngumthengisi. Ukuthumela ngokulula ifom yewebhu kwiwebhusayithi yakho kunokuyivula inkqubo yakho kwizinto ezithile ezimbi.
UBrandon Wood Wenze umsebenzi omkhulu wokubhala iZikhokelo zaBaqalayo kuzo zombini izihloko ezinokuthi kuwe okanye kuthi siziqonde:
Iskripthi sokuwela umnqamlezo
Uvuyo lonyaka omtsha ... Mhlawumbi
Jan 3, 2007 kwi-11: 40 AM
Wow, enkosi ngeposi Doug. Ndiziva ndiwongekile… 🙂
Ingxaki oyichazayo yokungazi ngenene ukuba uzibona njani ezi ntlobo zobuthathaka yeyona ngxaki inkulu ndiyibonayo. Ukuba ndibonisa umdwelisi wenkqubo ongazi nto malunga nokhuseleko isiqwenga sekhowudi kwaye ndibabuze ukuba ikhuselekile, ngokuqinisekileyo baya kuthi ikhuselekile - abayazi into abayifunayo!
Eyona nto iphambili apha kukufundisa abaphuhlisi bethu malunga nokuba bajonge ntoni, kunye nendlela yokuyilungisa. Leyo yayiyinjongo yamanqaku am amabini.
NgoJanuwari 3, 2007 ngo-2:37 PM
Isenokungabi yindawo efanelekileyo kodwa uze ukwazisa into enzulu.
PS: Ndingathanda ukwazisa malunga nomngcipheko oMkhulu kwi-wordpress endikwaziyo ukuyifumana.I-hack enkulu kwi-wordpress enomngcipheko we-7/10.Andiyi ntengiso kodwa jonga kwisithuba sam se-html-injection-and-being. -igqekeziwe.Nceda ungazise ngale nto kwezinye iibloggers.Ndibe nentetho noMat(WordPress) kwi-imeyile ngayo
NgoJanuwari 6, 2007 ngo-8:43 PM
Ndiyabulela ngokundazisa malunga nale nto - ndiphuculwe kwi-WordPress 2.0.6. Ndiyakholelwa ukuba wawuhoyile lo mba.
NgoJanuwari 6, 2007 ngo-8:47 PM
Ewe iphelile ngoku.Kuhle ukuba inguqulelo elandelayo yaphuma ngokukhawuleza
PS: ngaba sinako ukutshintshiselana ikhonkco? ndixelele ukuba uyawuthanda umbono
Juni 25, 2008 ngo-3: 33 PM
I-WordPress MySQL iskena esingaxhunyiwe kwi-intanethi?
Ngaba kukho isixhobo esikhoyo esinokuskena i
ngaphandle kwe-intanethi ye-WordPress itheyibhile ye-MySQL ethunyelwe ngaphandle kwi-phpMyAdmin?
Sine-WordPress MYSQL database ebonakala ngathi inayo